UThomas Edison - Ukudibanisa Ukubukeka nokuVakala
U-Edison wanikeza ii-kinetoscopes ngeekramafoni ngaphakathi kweekhabhinethi zazo
I-Kinetoscope yinkqubo yokubonisa imifanekiso yokuqala. Ukususela ekuqalisweni kwemifanekiso eshukumayo, abaqambi abahlukahlukeneyo bazama ukuhlanganisa ukubonwa kunye nokuvakala ngokusebenzisa "imifanekiso". I-Edison Company yaziwa ukuba yenze le nto ngethuba lokuwa kwe-1894 phantsi kolawulo lweWKL Dickson kunye nefilimu eyaziwayo namhlanje njengeDickson Experimental Sound Film . Ifilimu ibonisa indoda, mhlawumbi ibe nguDickson, idlala i-violin phambi kocingo lwegronograph njengendoda emibini idanisa.
Iprototype yeKinetoscope yaboniswa kwingqungquthela yeSizwe soMbutho weeKlabhu zeTyhini ngoMeyi 20, 1891. I-premietere yeKinetoscope egciniweyo yayingabanjwanga kwi-Fair World Fair, njengoko yayilungiselelwe ekuqaleni, kodwa kwiBrooklyn Institute of Arts kunye ZeSayensi. Ifilimu yokuqala eboniswe esidlangalaleni kwenkqubo yenkqubo ye- Blacksmith, ekhokelwa nguDickson kwaye idutshulwa ngabanye abasebenzi bayo. Yayikhiqizwa kwi-studio entsha ye-Edison, eyaziwa ngokuba nguMnyama Maria. Nangona kuphakanyiswa kakhulu, ukubonakaliswa okukhulu kweKinetoscope, okubandakanya ubuninzi beemishini ezingama-25, akuzange kwenzeke kwi-Chicago ukuchazwa. Ukuveliswa kweKinetoscope kuye kwabambezeleka ngenxa yecala likaDickson elingaphezu kwamaviki angama-11 ekuqaleni konyaka kunye nokuphazamiseka kwemihlaba.
Ngentwasahlobo ka-1895, u- Edison wayenikela iiKinetoscopes ngeekramafoni ngaphakathi kweekhabhinethi zazo. Umbukeli wayeza kujonga i-Kinetoscope ukuba abukele umfanekiso ohambelayo ngelixa ephulaphule igronograph ehamba ngeepayipi ezimbini ze-rubber ezixhunyiwe kumatshini (i-Kinetophone).
Umfanekiso kunye nesandi senziwe ngokuchanekileyo ngokudibanisa ezimbini kunye nebhanti. Nangona okokuqala ukuveliswa komatshini kwakucacisa, ukuhla kwe-Kinetoscope ishishini kunye nokuhamba kukaDickson ku-Edison kwaphela omnye umsebenzi oqhubekayo kwiKinetophone iminyaka eyi-18.
I-New Version yeKinetoscope
Ngomnyaka we-1913, inguqu eyahlukileyo ye-Kinetophone yaziswa kuluntu.
Ngeli xesha, isandi senziwe ukuba sivumelanise nesithombe eshukumisayo esicweyo kwisikrini. I-celluloid yirekhodi yokulinganisa i-5 1/2 "ububanzi isetyenziselwa igronograph. Ukuvumelanisa kwafezekiswa ngokuxhuma umprojekthi kwiphepha elinye lendawo yokudlala kunye negronograph kwelinye icala nge-pulley ende.
Imifanekiso yeshumi elinesixhenxe yokuthetha yaveliswa ngo-1913 ngu-Edison, kodwa ngowe-1915 wayishiye imifanekiso eshukumisayo. Kwakukho izizathu ezininzi. Okokuqala, imithetho yemanyano ibonise ukuba abahlali be-union projectionist kwafuneka basebenze iikinetophones, nangona bebengakhange baqeqeshwe kakuhle ngokusetyenziswa kwayo. Oku kwakhokelela kwiimeko ezininzi apho ukuvumelanisa akuzange kuphunyezwe, kubangele ukuphulaphulwa kwabaphulaphuli. Indlela yokuvumelanisa isetyenzisiweyo yayisaphantsi kobugqibeleleyo, kwaye ikhefu kwifilimu iya kubangela ukuba imifanekiso eshukumisayo iphume ngesinyathelo kunye nerekhodi yegronograph. Ukuchithwa kwe-Motion Picture Patents Corp ngo-1915 kunokuncedisa ekuhambeni kuka-Edison kwiifilimu ezivakalayo kuba lo mqathango wawunqanda ukukhuselwa kwephepha lobungqina bemifanekiso.
Iiprojekthi eziyi-100 eziphezulu ezenziwe eCanada
U-Alessandro Volta (1745-1827)
Ngubani owasungula i-Intel 1103 i-DRAM Chip?
Ngubani owasungula iPuzz Puzzle?
Iinjongo zokuQinisekisa kwi-Kid - Izinto zokuQinisekisa zesikolo
UMadame Curie - Marie Curie kunye nee-Eleactive Elements
Indlela Yokugcina I-Fall Caterpillars Alive Unyaka
I-Beatles Songs: "Penny Lane"
I-Top 10 yelizwe elithandekayo iingoma
6 nee-pasos ezikhethiweyo ze-Corte de Inmigración para otro estado
Ukufundisa Imali Ukubala izakhono
I-Penn State Altoona Admissions
Ukusebenza rhoqo kweTigers kuni?
I-Angel Energy Clearing: Indlela yokuCima amandla aMandla aKwasekhaya
I-Vers vs Intshutshiso - IziFundo zesiFrentshi
UMTHETHO Ulinganisa iiYunivesithi zikaRhulumente
Indlela yokwenza iProjekthi yeSayensi yeNzululwazi
Iiprofayile zaseKholeji A ukuya kuZ
Iintlobo ezi-5 zeNtsapho zokuBonga
Yintoni okuyiPakisha xa ufika ekhaya ukusuka kwikolishi
I-League of Nations
I-10 Plutonium Facts (iPu okanye iNombolo ye-Atomic 94)
Yintoni eyahlukileyo phakathi kweCelsius neCentigrade?
Iinqwelo ze-Snowboards ezininzi kakhulu
Iimpawu eziqabulayo malunga neParty Lady Butterfly (Vanessa cardui)
Imisebenzi yesithandathu imihla ngemihla Bonke ootitshala kufuneka bayenze
I-Dinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala ZaseNew York